Ntuziaka 3 maka Emailmepụta Email-Njikere | Martech Zone
Tupu ịmalite ịchọpụta otu esi emepụta email nke na-eme ka ekwentị na-agagharị, ị kwesịrị ịjụ onwe gị "Gịnị bụ ndị nnata gị iji lelee email gị?" ma ọ bụrụ na ị chọpụta na e nwere mkpa maka a mobile kachasị email, mgbe ahụ oge eruola ịmalite ịtụle otu esi aga maka ịmepụta ya.
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji mepụta ozi ịntanetị-njikere maka mkpọsa email gị.
1. Usoro Usoro.
Ekwentị mkpanaka na-agbadata usoro isiokwu email dị mkpụmkpụ na mkpụrụedemede 15. Kpachara anya mara nke a mgbe ị na-ekepụta usoro isiokwu ahụ na-adọrọ adọrọ maka ndị na - agụ ya.
2. Email okirikiri nhọrọ ukwuu.
Yiri nhazi na ozi ịntanetị, usoro ntanetị email nwere ike ibute ọtụtụ ihe dị iche iche - ụzọ niile site na akụkụ ruo na njikọta. Ihuenyo na ngwaọrụ mkpanaka doro anya karịa, yabụ chee na mgbe ị na-eke email gị. Kpebisie ike na ihe oyiyi ga-eme nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ikekwe ị kwesịrị itinyekwu ederede kama. Ma n'ezie, cheta: abụba mkpịsị aka na obere ekwentị, mgbe ị na-eke bọtịnụ na njikọ!
3. Nwale, nwaa, nwaa!
Anyị na-emesi okwu a ike oge niile mgbe ị na-ekwu maka omume ịmasị email kachasị mma, yabụ anyị chọrọ ịga n'ihu n'omume ọma a ma ọ bụrụ na ị na-ekekwa ozi ịntanetị mkpanaka. Tupu izipu ndị debanyere aha, gbaa mbọ hụ na ịnwalela email gị iji hụ na ọ na-eme nke ọma.
Tags: Campaignscontent MarketingemailMobile na Mbadamba ụrọisiokwuule
Feb 20, 2012 n’elekere 11:17 nke abali
Achọpụtala m na ọtụtụ smartphones ga-abanye na ọdịnaya ọ bụrụhaala na edeziri ya nke ọma - n'ihe banyere email, echere m na nke a bụ tebụl na ogidi. Ọ bụrụ na ahụ nke email gị dị n'otu kọlụm na ogwe dị n'akụkụ nke ọzọ, ọ na-adị ka ọ ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ịpịgharịa ihuenyo gị ka mbugharị. Ma, mgbe ụfọdụ, font ahụ pere mpe na ụfọdụ ozi ịntanetị, ọ naghị enyere aka. Debe mpempe akwụkwọ gị ọmarịcha ma dezie peeji gị maka omume kacha mma nke email!
Feb 20, 2012 n’elekere 11:20 nke abali
Enwebeghị onye na-akwado ịgụ ma ọ bụ ịza ozi email na ekwentị 😉 na-eche na ụfọdụ ihe kwesịrị ka kọmputa-dị ka ntakịrị ihe kwesịrị ka kpọọ ekwentị, kama email.
Feb 20, 2012 n’elekere 11:24 nke abali
Eji m obi m niile mara na m nwere ike ijikwa olu email m nwetara na-enweghị nyocha na nzacha na ekwentị.
Feb 23, 2012 na 11:21 PM
Agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị abụrịrị n'akụkụ akụkụ ihe okike, m ga - agbakwunye, tụọ, tụọ! Tụọ mkpọsa gị na A / B nwalee ha ka ha hụ otu ha si eme ma bulie ozi email ọ bụla megide ihe metrik gị na-agwa gị.
Greatfọdụ nnukwu ndụmọdụ ebe a…
Echere m na ọ dị mkpa maka ndị na-ere ahịa dị oke mkpa maka ịgba ọsọ na-aga nke ọma ka ị ghara ileghara ikpo okwu ekwentị anya.
Karịa mgbe ọ bụla, ndị mmadụ na-aga ma na-eme emelitere site na ekwentị ha.
Ke ofụri ofụri, e nwere ụfọdụ oké ngwá ọrụ maka optimizing e-Gburu, kwa.
Otu ọkacha mmasị m bụ ngwa (n'efu) akpọrọ XmailWrite. Emechara m ozi banyere ya, nke nwere ike ịbara onwe gị ma ọ bụ ndị ọzọ uru.
Nke a bụ njikọ nke vidiyo / blog post: http://www.multiplestreammktg.com/blog/your-new-secret-weapon-for-writing-e-mails/
Na-akpakọrịta Marketing Manager